MOD Ayaa Xisbigu Ka Bilaabmay Ciyaar Weyn | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » News » MOD Wuxuu Helaa Xisbiga Wuxuu Ka Bilaabmay Ciyaarta Weyn
VFX iyo istuudiyaha dhameystirka wuxuu dhigaa Toddobaadka usbuuca sare ee Raymond James Stadium si xariif ah ugu furitaanka bandhigga nuska.
ATLANTA- Sannadkan Pepsi Super Bowl LV Halftime Show ayaa u bilaabmay lama illaawaan lama illaawaan ah qaybna ka ah sixirbararka 'MOD'. Istuudiyaha abaalmarinta-ku guuleystay wuxuu bixiyay adeegyo saameyn muuqaal ah oo loogu talagalay bandhiga furitaanka xiisaha leh ee The Weeknd uu ka muuqdo gadaal gawaarida Mercedes Coupe iyadoo lagu dhexjiro muuqaal muuqaal qurux badan.
Waxaa agaasime ka ah Alex Lill oo uu soo saaray Brendan Garrett, bilicsanaanta, riyooyinka isku xigxiga ayaa soo bandhigaya aragti qaabeysan oo ku socota Marinka Las Vegas oo ay ka buuxaan astaamo neon ah oo dhalaalaya iyo casinos weyn. Maaddaama uu Toddobaadku ka tagayo gaarigiisa oo uu fadhiisanayo dusha sare ee boodhadh garaacaya, muuqaal yaab leh, indho casaan leh, oo huwis ah ayaa kor ka soo dhacaya. "Waxaan sameeyay waxyar oo xayeysiis ah Super Bowl intii aan ku guda jiray xirfadeyda, laakiin tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee aan ku lug yeesho bandhigga laftiisa," ayay tiri MOD Creative Director Les Umberger, oo kormeer ku sameysay muuqaalka. “Waa dhalanteed indhaha weyn! Ujeeddadeennu waxay ahayd inaan gaarsiino gabal shaneembo ah oo ay la jaan qaadi karaan dadka adduunka oo idil. Faahfaahin kastaa si sax ah ayaa loo qaabeeyey, loo qortay loona fuliyay, laakiin muuqaalka ayaa ah mid xiiso leh oo dareera.
Tixdu waxay qaadatay toddobaadyo in la qorsheeyo oo ay kujirto fallaadho toos ah oo toos ah oo leh saacad-saacad iyo kal-fadhiyo muuqaal ah oo lagu qabtay istuudiyaha MOD ee Atlanta. Umberger waxaa loo diyaariyey soosaarka ficilka tooska ah wuxuuna adeegsaday boosteejo olol oo la qaadan karo si uu u soo indho-indheeyo isku-darka iyo u gudbinta alaabada kooxda saamaynta muuqaalka. "Waxa jiray qaybo badan oo dhaqaaqaya shaqadeenuna waxay ahayd inaan hubinno in wax walba ay ku habboon yihiin aragtida," ayuu yidhi. “Waxay ahayd dadaal super-iskaashi u dhexeeya macmiilka, wax soo saarka, waaxda farshaxanka iyo kooxdayada. Waxba looma iloobin oo natiijooyinka waa cajiib. ”
Umberger wuxuu qaddariyaa fikrad aad u fiican, qorsheyn dhammaystiran iyo isuduwidda dhow ee guusha. "Waxay ahayd hab lama filaan ah oo aan caadi ahayn oo qabow oo lagu bilaabi karo Bandhigga Badhtamaha," Umberger ayaa ilaalinaya. Taxanahan waa wax gebi ahaanba ku cusub waayo-aragnimada Show-ga nus-dhamaadka. ”
MOD sidoo kale waxay la shaqeysay Lill iyo Garrett meel qallafsanaanta xiisaha leh ee Bandhigga Badhitaanka. Waxay ku tusaysaa Toddobaadka (Toddobaadka) miiska qaxwada ee bartamaha garoon kubbadda cagta lagu ciyaaro. Wuxuu qarka u saaran yahay inuu wax cuno marka, si aan macquul ahayn, kow, ka dibna dhowr, ka dibna boqollaal kubbadda cagta ah ay ka soo da'aan kor. "Waan jeclaanay fikradda," ayuu soo xusuustay Umberger. Shaqaalaheena waxaa lagu dhiirigeliyey inay wax weyn ka dhigaan. Waa isku dhaf cajiib ah oo saameyn wax ku ool ah iyo CG, taasoo adkeyneysa in la sheego waxa dhabta ah. ”
Shaqada 'Super Bowl' ee loo yaqaan 'Super Bowl' waxay ku timid ciribta dhowr mashruuc oo muusig heer sare ah oo muusig ah, mid walbana waxaa ka buuxay muuqaallo yaab leh. Waxay ka mid ahaayeen Drake's Qosol Hada Ooya Mar Dambe (Lil Durk oo leh), oo ay ka soo muuqdaan xiddigaha isboortiga ee Kevin Durant, Odell Beckham Jr. iyo Marshawn Lynch waxaana lagu dejinayaa xarunta adduunka ee Nike ee Oregon. Istuudiyaha sidoo kale wuxuu wax ku darsaday Travis Scott's taaso, oo ka soo muuqday IMAX tiyaatarada ka hor baaritaanka Mawduuc (Saameyn muuqaal oo dheeri ah oo ay bixiso Istuudiyaha Ingenuity) iyo Ariana Grande's jagooyinka (saameyn muuqaal oo dheeri ah oo ay bixiso Ghost VFX.).
Fiidiyowyada Drake iyo Ariana Grande waxaa hagayey Dave Meyers, oo ah iskaashi iskaashi ah oo soo noqnoqda ah. Travis Scott iyo White Trash Tyler ayaa haga Franchise. Dhammaantood waxaa soo saaray FREENJOY. Shaqada istuudiyaha ee saddexda mashruuc waxay u dhaxeysay darbooyin saameyn balaaran leh, ilaa saameyn kakan oo aan muuqan si loo caawiyo sheekooyinka, ilaa naqshada cinwaanka. "Waxaan jecel nahay inaan ka shaqeyno mashaariicdan oo kale," ayuu yiri Umberger. Waxay siiyaan fanaaniinteena fursado si ay hal abuurnimadoodu u duusho. ”
In kasta oo sida ugu wanaagsan loogu yaqaan saamaynta sare, lama iloobi karo, muuqaalka joojinta muuqaalka, MOD ayaa si isku mid ah ugu fiicnaaday ka shaqaynta khiyaanooyinka, sawirada saamaynta leh ee mashaariicda xayeysiinta. U fiirsashadeeda si faahfaahsan iyo dil aan kala go ’lahayn ayaa lagu caddeeyay shaqadii ugu dambeysay ee loo qabtay Reebok, Yves Saint Laurent iyo Ralph Lauren. "Hay'addeena iyo macaamiisheena ganacsiga waxay jecel yihiin iskaashiga, dhaqanka tooska ah ee farshaxanka ee udub-dhexaadka u ah MOD waxayna qaddarinayaan u heellankeenna ah inaan muuqaal kasta oo fiican ka soo saarno," ayuu yiri Umberger. “Had iyo jeer waa shaqada wanaagsan ee ku saabsan astaamaha sifiican loo fahmay ee muuqaalka taasoo gacan ka geysaneysa qaadashada bilicsanaanta heerka xiga. Anaga ku nool taas aawadeed. ”
commercials muusikada muusiga Suugaanta Super Raadka Visual 2021-02-19
Previous: DaVinci Resolve Studio wuxuu Taageeraa Nice Shoes 'Shaqo Soosaarka Boostada fog
Next: Quicklink wuxuu ku fidaa dalka Mareykanka furitaanka xafiiska Mareykanka